सवारीसाधन चलाउँदा यी कुरामा ध्यान दिनुस्, दुर्घटना हुनबाट जोगिनुस्
नेपाल लाइभ सोमबार, असोज २०, २०७६, १०:५९
काठमाडौं- सावरी चलाउँदा स–सानो कुरामा ध्यान नदिँदा दुर्घटना निम्तिन सक्छ। दसैंको समयमा कतिपयले आफ्नो सवारी लिएर यात्रा निस्कन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सावधानीपूर्वक सवारी चलाउनु जरुरी हुन्छ। त्यसैले गाडी चलाउँदा सना साना कुराहरुमा ध्यान दिनुभयो भने दुर्घटबाट बच्न सकिन्छ। यहाँ सवारी चलाउँदा सुरक्षित चालनका लागि ध्यान दिनुपर्ने कुराबारे उल्लेख गरिएको छ।
ध्यान एकिकृत गर्नुस्ः गाडी चलाई रहेको समय तपाईको आँखा जहाँ पर्छ स्वभाविकरुपमा तपाईको ध्यान त्यही पुग्छ, त्यसैले गाडी चलाउँदा ध्यान केन्द्रित गर्नु पर्छ। गाडी चलाउँदा मोवाइलमा कुरा गर्ने, म्यासेज गर्नेलगायत काम कार्म गर्दा दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ।
१. अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीले गरेको अनुसन्धानबाट गाडी चलाउँदा चलाउदै मोबाइलमा कुरा गर्दा ३ गुणा दुर्घटनाको सम्भावना बढ्छ भने म्यासेज गर्नु झनै खतरनाक हुन सक्छ। म्यासेज गर्न थाल्दा दुर्घटना हुने सम्भावना २३ गुणाले बढ्ने उक्त अध्ययनले देखाएको छ।
२. रियर भ्यु ऐना मिलाउनुस्ः गाडी चलाउनु पूर्व आफ्नो बसाइ र पोजिसन अनुसारको दुबै ऐना मिलाउनु पर्छ। जसले सडकमा गाडी लिएर हिँड्दा तपाईंलाई बाटोको अवस्था जान्न सहयोग पुग्छ।
३. आफ्नो ड्राइभिङ सिट तल राख्नुस्ः धेरै जसो चालकहरु आफ्नो सिट माथी उठाएर राख्न मन पराउँछन् । सिट माथी उठाएर राख्दा गाडीको स्पिड धेरै भएपनि चालकलाई कम लाग्न सक्छ। तीव्र गतिका कारण दुर्घटना हुने सम्भावना बढ्छ। त्यसैले चालक सिट तल राख्नुभयो भने कम गति पनि चालकलाई छिटो लाग्छ त्यसले दुर्घटना हुनबाट बचाउँछ।
३. लाइट बाल्नुस्ः क्यानेडाको एक सर्बेले दिनमा लाइट बालेर सवारीसाधन चलाउँदा ११ प्रतिशत दुर्घटना कम भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको थियो। त्यसैले अहिले आएका सवारी साधनमा बत्ति न निभ्ने बनाइएको छ।
५. आफ्नो हातको चेक गर्नुस्ः गाडी चलाई रहेको समयमा हातको पोजिसन गलत भएको खण्डमा दुर्घटनाको खतरा बढी हुन्छ त्यसैले सकभर हातको अबस्थामा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ।
६. सडक बत्तिमा ध्यान दिनुस्ः सडकमा सवारी साधन लिएर हिड्दा मानिसहरु हतारमा देखिने गरेका छन्। त्यसरी हिँड्दा कुन लाईट बलिरहेको छ भन्ने यादसमेत राख्दैनन् त्यस्तोमा दुर्घटना बढ्ने अधिक सम्भावना हुन्छ। साथै सडक बत्ति भएको ठाउँमा यादनगरी सवारी चलाउँदा जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने हुन्छ।
द्रुतगतिमा मोटरसाइकल चलाउनेले सुरक्षित हुन थाहा पाउनु पर्ने तथ्य
युवाहरु मोटरसाइकल प्रति आकर्षित हुनु स्वभाविक मानिन्छ। प्राय: युवाहरू तीव्र गतिमा मोटरसाइकल चलाउने गर्छन्। हाइवेमा झनै धेरैले तीव्र गतिमा मोरटसाइकल कुदाउने गरेको पाइन्छ।
मोटरसाइकल यात्रालाई जति रोमान्चक मानिन्छ, दुर्घटनाको दृष्टिकोणले त्यति नै असुरक्षित पनि। पछिल्लो समय नेपालमा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गएको छ। यहाँ सुरक्षित ड्राइभिङका केही टिप्स उल्लेख गरिएको छ।
एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टम
पछिल्लो समय बजारमा आएका मोटरसाइकलमा एन्टिलक ब्रेकिङ सिस्टमको विशेषता उपलब्ध छ। कम्पनीले मोटरसाइकललाई थप सुरक्षित बनाउन यो विशेषता दिने गरेका हुन्। चालकले सकेसम्म एन्टिलक ब्रेक सिस्टमयुक्त मोटरसाइकल खरिद गर्दा यात्रा बढी सुरक्षित हुन्छ।
सर्टिफाइट हेलमेटको प्रयोग
प्राय: कमसल हेलमेट प्रयोगका कारण दुर्घटनाको क्रममा चालक वा पछाडि बस्ने यात्रुको मृत्यु हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। मोटरसाइकल चालकले राइडिङको समयमा अनिवार्य रुपमा डर्ट सर्टिफाइट हेलमेटको प्रयोग गर्नुपर्छ। यस्ता हलमेटमा राम्रो मेटिरियल प्रयोग गरिएको हुन्छ। जसले दुर्घटनाको समयमा टाउकोमा असर पर्नबाट जोगाउँछ।
प्राय: नयाँ पुस्ताका चालकले प्रतिस्पर्धा गरेरै मोटरसाइकल हाँक्ने गर्छन्। अत्यधिक गतिका कारण मोटरसाइकल नियन्त्रण बाहिर गई दुर्घटना हुने गर्छ। त्यसैले मोटरसाइकल चलाउँदा सडकको अवस्था र नियम अनुरुप आफ्नो मोटरसाइकलको स्पिड कायम गर्नुपर्छ।
दुवै ब्रेकको प्रयोग गर्न सिक्ने
मोटसाइकलमा उपलब्ध दुबै ब्रेकको प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। यसले राइडिङलाई थप सुुरक्षित बनाउने छ भने पर्फेक्ट राइडर बन्नका लागि दुवै ब्रेक लगाउन सिक्नुपर्छ।